Ukuchazwa kwezinsuku zesonto
Isonto wusuku lokwenza imixovo yenhlanhla nempumelelo. Lolusuku lubizwa ngosuku lwelanga, ngalolusuku kumele wenze umuthi oletha ukukhanya nokuya phambili empilweni yakho. Ngalolusuku wenza umuthi odinga ikhandlela eli-yellow noma eli-orange. Qgoka izingubo ezi-gold, orange noma ezi-yellow ngesonto.
Lolusuku lusondelene nabantu besifazane, okusho ukuthi umxovo owenza ngalolusuku maningi amathuba okuthi ube yimpumelelo, umbala walolusuku umhlophe. Wusuku lwenjabulo. Ngomsombuluko ukhanyisa ikhandlela elimhlophe. Qgoka izingubo ezinombala okhanyayo, omhlophe, o-silver noma light blue.
Ulwesibili wusuku lwempi. Usuku lokusebenzisa umuthi wamandla, wokuziphindiselela noma wokucupha abakulwisayo. Njengoba kuwusuku lwempi umbala walo ubovu, amakhandlela osuku abovu, amnyama noma-orange. Qgoka izingubo ezine-colour e-red, black noma orange.
Ulwesithathu wusuku luka-purple no-green, lolu wusuku oluhle uma ufuna ukwenza ushintsho empilweni yakho. Uma ufuna ukwenza umuthi womsebenzi wenze ngolwesithathu.
Ulwesine wusuku lokucela inhlanhla, nokucela ukwandiselwa konakho. Wusuku lwamakhandlela angumbala o-blue kanye na-brown.
Phumzile 2020-12-13 00:59:05
Power doc rock Power doc rock Power doc rock Power doc rock